Ireo zazavavy mavomavo mavomavo ao an-trano, Manaova feo (produits) - NYE Countdown ho Djs, Vjs, Nightclubs 2019
SKU: DJ DROP 100 - #46 Sokajy: DJ Drops
Ireo zazavavy mavomavo mavomavo ao an-trano, Ataovy ny tabataba (novokarina)
Ny ravinkazo ao an-trano ... azoko atao ny Hell-Yeah! (Vokatra)
Mixin ny beatsina ary atsipazo ny hafanana! (Novokarina)
Raha ny iray amin'ireo Taom-panolorana ny taona dia tokony hisotro toaka bebe kokoa ... misy olona mikiakiaka! (Vokatra)
Tsy azontsika daholo ve ny rehetra? (Vokatra)
Custom DJ Audio Mandeha
Hatramin'ny 30 Sekondan'ny pejin-dresaka manokana miaraka amin'ny feo sy ny vokany! Ny feo rehetra dia ampiasaina miaraka aminao dj, orinasa na klioba ao anaty tohatra. Manana ny safidinao ianao na lahy na vavy. Amerikana, Anglisy na Espaniôla. Tsara ny manamarika ny mixes sy ny klioba! Fampiasana fampakaram-bady DJs hampiasa izany hanamafisam-bika kokoa ny gigs amin'ny alalan'ny fanasongadinana ny anaran'ny Ampakarina sy ny Anjeliny ao anatin'ny feo. MAHITA tsiambaratelo!
Ladies and Gentleman ... Happy New Year! (Vokatra)
Azoko azafady ve ny sainao? Raha toa ao amin'ilay trano i Freddie Murphy, tongava mankany amin'ny varavarana fidirana. Fantatry ny vadinao fa eto ianao. Avereno izany, Freddie Murphy dia eto ny vadinao. Azafady azafady azafady ny tranobe ... voadona ianao! (Vokatra)
Ny zazavavy lehibe rehetra dia mitabataba! (kisoa) (novokarina)